Ukulanda kwe-Foxy Apk Kwe-Android [Ama-movie + Nochungechunge] - I-Luso Gamer
Manje silethe ukuzijabulisa entendeni yesandla sakho. Ukufaka i-Foxy Apk ngaphakathi kwama-smartphones e-android kuzovumela abasebenzisi be-android ukuthi bajabulele ama-Movie angapheli nochungechunge mahhala. Abadinga ukukwenza nje ukulanda inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lapha.
Iningi lamapulatifomu afinyeleleka ku-inthanethi afaka iNetflix ne-Amazon Prime. Zidumile phakathi kwabasebenzisi be-Android futhi iningi lababukeli lincoma amapulatifomu anjalo. Ngoba amapulatifomu anjalo anikeza ukufinyelela okuqondile kokuqukethwe kokuzijabulisa.
Kodwa kunenkinga eyodwa abalandeli abangase babe nayo ngenkathi befinyeleleka. Leyo nkinga ukubhalisela i-premium noma ilayisensi yochwepheshe. Ngakho-ke ukucabangela ukubhalisa kwe-premium kubiza abathuthukisi abahlele i-Foxy App.
Iyini i-Foxy Apk
I-Foxy Apk iyinkundla yokuzijabulisa eku-inthanethi ehlelekile egxile kubasebenzisi be-android. Isizathu sokusungula inkundla ukuhlinzeka ngenkundla evikelekile eku-inthanethi. Lapho ababukeli bengasakaza kalula futhi bajabulele ukubuka okuqukethwe kokuzijabulisa okungapheli.
Njengoba sishilo ekuqaleni ukuthi inqwaba yamapulatifomu afanayo ayatholakala ku-inthanethi. Iziphi ezidumile futhi ezihamba phambili phakathi kwabasebenzisi be-android. Kepha iningi lalezo zinkundla ezifinyeleleka ku-inthanethi ziyi-premium futhi zidinga ukubhaliswa.
Ngaphandle kokuthenga ukubhalisa, akunakwenzeka ukufinyelela okuqukethwe. Ngakho-ke uma kucatshangelwa ukufinyeleleka okulula nokukhululekile kokuqukethwe kokuzijabulisa. Abathuthukisi ekugcineni bahlele le android emangalisayo Uhlelo lokusebenza lwe-Movie kubasebenzisi be-smartphone.
Manje ukuhlanganisa i-Foxy Movie Apk ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android kuzovumela abathandi be-Movie. Ukuze usakaze futhi ulande amavidiyo angenamkhawulo mahhala. Abadinga ukukwenza nje ukulanda inguqulo yakamuva yohlelo futhi ujabulele okuqukethwe kwe-premium.
Usayizi 22.66 MB
Igama lephakheji com.foxystreaming.tv
Lapho sihlola ifayela lohlelo ngokujulile lapho sithola inkundla inothile ngezici. Lokho kufaka phakathi Isiphathi Sokulanda, Izigaba, I-TV Ebukhoma, Uhlu Lokuhlola Oluyintandokazi, Isihlungi Sosesho Ngokwezifiso, Isikhumbuzi Sesaziso, Ideshibhodi Yesilungiselelo Eningiliziwe nokunye.
Isengezo esibaluleke kakhulu abasebenzisi abazosithanda amaseva asheshayo. Khumbula, sizwe izikhalo eziningi mayelana nezinkinga zokusakaza bukhoma kanye nokusalela emuva. Inkinga enkulu edala le nkinga yokusalela ingenxa yokunensa kokuxhumeka kwe-inthanethi.
Ngaphandle koxhumano olunensayo, ukulayishwa kweseva nakho kubaluleke kakhulu. Uma amaseva enziwa izimungulu ngenxa yethrafikhi enkulu ngesikhathi, lokho kungase kubangele le nkinga enkulu yokulengiswa. Ukubhekana nalolu daba oluthile futhi ucabange inkinga ye-lag.
Onjiniyela bafaka lezi ziphakeli ezisheshayo zokusingatha amavidiyo kanye namafayela ohlelo lokusebenza. Manje ababukeli akufanele bakhathazeke ngoxhumo lwabo lwe-inthanethi. Ngoba amaseva asheshayo azophatha ngokuzenzakalelayo isivinini sokunikeza.
Ngakho-ke uyazithanda izici ze-pro zohlelo lokusebenza futhi ulungele ukujabulela ama-Movie e-premium, uchungechunge nama-IPTV mahhala. Khona-ke mayelana nalokhu, sincoma ukuthi ulande futhi ufake i-Foxy Android. Lokho kuyafinyeleleka ukufinyelela kuwebhusayithi yethu ngokuchofoza okukodwa.
Lokho kufaka ama-Movie nochungechunge.
Iziteshi ze-IPTV ezibukhoma nazo ziyafinyeleleka.
Ungayilanda kanjani i-Foxy Apk
Uma kukhulunywa ngokulanda inguqulo ebuyekeziwe yamafayela e-Apk. Abasebenzisi be-android bangathembela kuwebhusayithi yethu ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikeza kuphela Izinhlelo zokusebenza eziyiqiniso nezangempela. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi kanye nobumfihlo.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle kwalapho ithimba lochwepheshe lingenaso isiqiniseko mayelana nokusebenza kahle kwefayela le-Apk. Asikaze sinikeze i-Apk ngaphakathi kwesigaba sokulanda kubasebenzisi be-android. Ukufaka i-Foxy Download sicela uchofoze isixhumanisi esinikeziwe esingezansi.
Khumbula ukufaka amafayela e-Apk axhaswe yizinkampani zangaphandle bekuhlale kuyingozi. Kodwa sesivele sifake ifayela le-Apk kuma-smartphones ahlukene e-android futhi asitholanga nkinga. Ngakho-ke uma ufuna inkundla ye-inthanethi ungafaka kangcono uhlelo oluthile.
Iwebhusayithi yethu inothe ngezinhlelo zokusebenza ezahlukene zokuzijabulisa. Okudumile futhi kunikeza ukufinyeleleka kwamahhala kuma-movie nochungechunge. Ukuze uhlole lezo zinhlelo zokusebenza ezifinyelelekayo sicela ulandele izixhumanisi. Labo banjalo I-HDHUB4U Apk futhi I-Rlaxx TV Apk.
Leli ithuba elingcono kakhulu labasebenzisi be-android ukujabulela ama-Movie angapheli, uchungechunge nama-IPTV mahhala. Okufanele bakwenze nje ukulanda inguqulo yakamuva ye-Foxy Apk kusuka lapha ngokuchofoza inkinobho yesixhumanisi sokulanda. Futhi ujabulele amavidiyo angenamkhawulo ngaphandle kokutshala imali eyodwa.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi I-Foxy Android, I-Foxy APK, Foxy App, I-Foxy Thwebula, Uhlelo lokusebenza lwe-Movie Imeyili kwemikhumbi
Ukulanda kwe-HDHUB4U kwe-Android [Ama-movie]